CELUM Inotungamira Dhijitari Asset Management | Martech Zone
CELUM Inotungamira Dhijitari Asset Management
China, May 5, 2016 China, May 5, 2016 Douglas Karr
Isu takanyora nezve chinangwa che Digital Asset Management masystem uye kugona kwavo kubatsira kuchengetedza maraki nekutumira mameseji, zvinopa inotsvaga injini yekutsvaga zvemukati, zvakare senzira yekushandura mhando dze media kuti dzishandiswe nenzira dzakasiyana. Vashambadziri vepamberi vanotoshandisa masystem ekutarisa kutengesa uye kuenderana kwekushambadzira pamwe nekubudirira kwekutengesa.
Nepo mamwe akawanda maDAM system ari ekuremekedzwa faira system iyo isinganyatso kugadzirisa maitiro, CELUM yakavakwa kuti ive nzvimbo yepakati yezvinyorwa. Iyo inokwanisa kuita sekunge yaive yako ERP, CRM, PIM kana webhu zvemukati manejimendi sisitimu uye inobvumidza yakananga zvemukati orchestration kune dzakawanda chiteshi.
Iyo chikuva inobvumira mabhenji ku gadzira yavo yega rekupinda peji, iyo dashibhodhi uye nzvimbo yekushandira - inoonekwa kune vekunze nekunze vashandisi. Mhando dzakasiyana dzekushandura dzinogoneswa neyakajairika dhizaini, iyo inogona kugadziridzwa yemapoka akasiyana evashandisi vachishandisa Configuration Management Chikumbiro (CMA).
CELUM akaburitsa a mutsva wemasiraidhi maneja wehofisi.connect uye PowerPoint®. Iyo sisitimu inogona kuisa zvakananga masiraidhi kubva kune imwe kana akati wandei mharidzo muchiratidziro chazvino. Akawanda masiraidhi kubva kune akasiyana mharidzo anogona panguva imwe chete kusarudzwa uye kuiswa mune yekuratidzira. Mushandisi ane nzwisiso yeshanduko dzese dzakaitwa kumharidzo yakarongedzwa uye kuwana kune mharidzo dzakaburitswa dzinogona kutadziswa.
Zvimiro zveCELUM's Dhijitari Asset Management:
Nyore kurodha pasi uye kutsvaga - Isa zviri nyore - imwe chete, batch kana zvakazara zvakazara uploads. Tsvaga zvinhu zvako kuburikidza newedzeredzwa zvinowoneka widgets.
Kugadzira kufambiswa kwebasa - Gadzirisa uye uteedzere nzira dzekugadzira nemabasa uye shanduro vhezheni.
Pima budiriro - Ona izvo zvirimo zvaita mushe mushe nzira - gadziridza nzira nekuongorora kuda uye zvikamu zvezvimwe zvirimo.
Automated kodzero manejimendi - Chengetedza kushandiswa kwekodzero, chengetedza marezinesi, uye ita shuwa kuti kusashandiswa zvakanaka kunoonekwa nekudzivirirwa.
Unganidza uye ununure - Gadzira uye uunze kuunganidzwa kune vateereri vakasiyana-siyana vane zvidziviriro zvekuchengetedza zvirimo.
Manage chero faira faira - Manage chero faira remhando uye tora kugona senge metadata kuburitsa, shanduko uye webhu yakagadziridzwa yekutarisa kweanopfuura mazana maviri mafomati mafomati.
Endesa kune mamwe masisitimu - Chero chero zvemukati kune chero sisitimu - yakagadziridzwa kune akasiyana zvemukati kutumira zvinyorwa uye zvishandiso. CELUM inogona kubatanidzwa kune chero sisitimu kuburikidza nemaAPIs ane simba.
Chengetedza kupinda - Imwe yeanonyanya kushanduka marongero ekudzivirira kodzero muindasitiri yekushandisa zvemukati. Chibvumirano chinotungamirwa nenhaka chinogonesa nzira dzakaomarara dzekubvumidza nakareruka.
Zvemagariro midhiya uye zvemukati - Kubatanidzwa uye kubudirira kuyera
Dhawunirodha CELUM's Whitepaper: Nei Bhizinesi Rako Rinoda DAM
Tags: muchiso utaririzvishandiso zvemhandocelumkugadzirisa manejimendi applicationdhamudigitaalinen aseti manejimendimafaira mafairaoffice.connectpowerpointmashizha emagetsi
Shakr: Gadzira Rako Bhizinesi Vhidhiyo Mavhidhiyo Pamhepo Uchishandisa Anoshamisa Matemplate
Ndeapi Iwo Akakurumbira Mubairo Ekusimudzira Kwako Anopa?